Makhasimende abathandekayo, Kusukela ngoFebhuwari 11 kuya kuFebhuwari 17, sizogubha umkhosi weNtwasahlobo ngalesi sikhathi. Ukulethwa kwasendaweni kuzoqala kabusha ngoFebhuwari 16. Ukulethwa kwamazwe omhlaba kuzoqala kabusha ngoFebhuwari 18. Ithimba lethu lezinto zokusebenza lizosebenza ngoFebhuwari 18 futhi. Ukusekela ukulethwa okusheshayo kwe ...
I-Immunobio ithuthukise ngempumelelo i-COVID 19 Neutralizing antibody Test Rapid, kanye nekhithi yokuhlola esivele ine-CE kanye ne-Chinese Approved。 ISITATIMENDE 1. IMMUNOBIO SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody Rapid Test (COVID-19 Ab) yenzelwe ukusetshenziswa ngobuchwepheshe kuphela. 2. Noma yimuphi umsabalalisi kufanele athole imvume efanele noma ...
I-Immunobio COVID 19 Antigen Rapid Test Kit ibhaliswe ngempumelelo eJalimane. Imiphumela yokuhlolwa kokubhalisa ikhombisa ukuthi imikhiqizo yethu isebenza kahle kakhulu futhi yaziwa kakhulu ngamakhasimende Ubhadane olusha (i-COVID 2019) luqubuke ngasekupheleni kuka-2019 lwashanela iChina ekuqaleni kuka-2020. Wonke umsebenzi o ...
I-HANGZHOU IMMUNO Biotech ibambe iqhaza embukisweni i-CPHI & P-MEC China 2020, ikhombise izinhlobo ezahlukahlukene ze-COVID 19 test kit neminye imikhiqizo ekulo mbukiso, amakhasimende eza etendeni ukuzobheka ekusakazeni okungapheli futhi afinyelela inhloso yokubambisana nenqwaba yamakhasimende. Use ...